पाकेको आँप मधुमेहका रोगीले खान हुन्छ कि हुँदैन ? | Safal Khabar
पाकेको आँप मधुमेहका रोगीले खान हुन्छ कि हुँदैन ?
शुक्रबार, ११ असार २०७८, १३ : ४२
काठमाडौं । गर्मी मौसम पाकेको आँपको मौसम हो । यो मौसममा स्वादिष्ट आँप खान धेरैलाई मन पर्छ । आँपमा कयौँ प्रकारका पोषक तत्वहरु पाइन्छन् । आँपमा प्राकृतिक मिठास हुन्छ । सबै प्रकारका व्यक्तिले आँप मन पराउँछन् । पाकेको आँपको स्वाद गुलियो हुन्छ । त्यसैले पाकेको आँप मधुमेहका रोगीले खान हुन्छ कि हुँदैन ?
कुनै पनि खानेकुराले ग्लाइसेमिक इन्डेक्स र्यान्कको माध्यमबाट रगतमा असर पुर्याउँछ । यसलाई ० देखि १०० को स्केलमा नापिन्छ । ५५ भन्दा कम र्यान्कको खानेकुरालाई कम चिनीवाला खानेकुरा मानिन्छ । त्यसैले आँप मधुमेहका रोगीका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।